UNHCR oo war ka soo saartay halka uu marayo dib u soo cilinta qaxootiga | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta UNHCR oo war ka soo saartay halka uu marayo dib u soo...
UNHCR oo war ka soo saartay halka uu marayo dib u soo cilinta qaxootiga
Qaramada Midoobey ayaa sheegtay in ay dib usoo celisay Qaxooti Soomaaliyeed oo aad u farabadan tan iyo markii uu bilowda Qorshaha dib u celinta Qaxootiga Soomaaliyeed ee kunool Xeryaha Qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya.
War kasoo baxay Hay’adda UNCHR ayaa lagu sheegay in tan iyo sanadkii 2014 tii ay dib u celisay Qaxooti Soomaaliyeed oo tiradooda lagu sheegay 39,316 qof , kuwaa soo kasoo laabtay Xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya.
Waxaa ay sheegtay UNHCR in tirada ugu badan ay soo celiyaan sanadkii 2016 dii daabulay diyaarado , waxaana laga dajiyay Magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo iyo Baydhabo.
In badan oo ka mid ah dadkaasi waxaa lagu soo daabulay diyaarado , waxaana laga dajiyay Magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo iyo Baydhabo.
Sidoo kale Hay’adda UNHCR ayaa sheegtay in isniinta soo socota dib ay u bilaabi doonto Safarada dhanka dhulka ee lagu soo daabulaayo Qaxootiga Soomaaliyeed, waxaana isniinta soo bixi doona ilaa iyo Afar kolonyo ah oo mid kaste uu qaado dad u dhaxeeya 350 -500 .
Xaqiijinta iyo sidoo kale qiimeynta dhanka Caafimaadka ee dadka u soo baxaya dhanka Soomaaliya aad ayaa loo xaqiijiyay, waxaaana qaxootiga la siin doonaan waxyaabo ay ku noolaadaan marka yimadaan Soomaaliya iyo sidoo kale inta ay ku soo jiraan jidka sida lagu sheegay warbixinta Hay’adda UNHCR.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay Hay’adda ay UNHCR ay kala shaqeyn doonto tilaabada dib loogu celiyo qaxootiga Soomaaliyeed si aan qasab aheyn.
Tiro yar ayaa lagu wadaa in ay haraan sanadka 2018 sida ay tahay saadaashu.
Dib u celinta Qaxootiga Soomaaliyeed ee kunoolaa xeryaha Dhadhaab ayaa timid ka dib markii dowladda Kenya ay dhowr jeer ay ku han jabtay in ay xirayso xeryahaasi
Previous articleAkhriso: war-murtiyeed ay soo saareen musharixiin uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya
Next articleAkhriso su’aalo iyo jawaabo: Wakiilka QM ee Soomaaliya oo ka su’aalo laga waydiiyay arimaha Doorashooyinka Soomaaliya